Chùm Thơ Tình Buồn Viết Về Hình Ảnh Con Tàu Và Sân Ga Hay | Anybook.vn - Anybook
Chùm Thơ Tình Buồn Viết Về Hình Ảnh Con Tàu Và Sân Ga Hay | Anybook.vn
Rahoviana aho no hanadino? Rahoviana ianao no hitsahatra tsy hanadino ny akon’ny fitiavanao voalohany? Rahoviana ianao no hilaza amiko ny fanaintainana ao ambadik’ireny dian-tongotra manify ireny? Ary, rahoviana ianao no ho maivamaivana hanomboka lohataona indray?! Tsia, mipetraha ary mamelà ahy hilaza aminao… Mamelà ahy hilaza aminao ny tantara taloha, tantara iray voaloko tamin’ny lasa. Tantaran’ny ankizilahy sy ankizivavy iray izay nifankatia fatratra tokoa… (rivotra mirenireny!)
Ny sarin’ny lamasinina sy ny lampihazo fiantsonana efa ela no nibahana ny tononkalo, dia ny sarin’ny fihaonana, ny fiverenana. Fa ny mifanohitra amin’izany, dia ny halavirana, ny alahelo, ny ranomason’ny mpifankatia, ny vehivavy mahita ny vadiny ary ny reny mahita ny zanany. Araka ny filazan’i Nguyen Binh hoe: Ny maso mando mijery ny maso – Aiza no mampalahelo noho ny eto amin’ity toerana ity… Manasa anao izahay hijery ireo tononkalo fitiavana mampalahelo momba ny sarin’ny lamasinina sy ny lampihazo aoriana, mirary soa!
» Voalohany, andeha hojerentsika ny tononkalo momba ny lamasinina sy ny lampihazo nosoratan’i Minh Nhat:
Nentinao nankany anaty lamasinina aho
Izany hoe mifanalavitra
Nirotsaka ny orana androany alina teo amin’ny lavarangana tsy misy na inona na inona
Atsipazo ny fanahiko oh fangirifiriana!
Rahona ny andro nialako
Manafina ny ranomasoko aho amin’ny tolakandron’ny fararano:
“Mifankatiava na dia lavitra aza”
Telo taona miala amin’ny ephemeral”
Alin’ny fiarahana sy manirery maro
Mandeha eo anilan’ny alokako aho
Misalasala ny fotoana tsy te hikoriana
Malahelo anao lavitra
Mandalo haingana koa ireo fararano telo haingana
Miambena mba hisintona ny rivotra amin’ny ridao
Miandry anao eo ivelan’ny varavarana
Tsy misy afa-tsy ny lalan’ny rahona manga
Misioka ny fiaran-dalamby ao amin’ny gara taloha
Mampalahelo, mitomany, mirotsaka ny orana
Miandry ny sarinao eo amin’ny lampihazo kely
Andalana vitsivitsy ihany ny legioma kanelina
Tonga eto an-tranonao aho amin’ny faran’ny fanjonoana
Ao am-pon’ny tebiteby mitomany
Miandrandra ny andalana ravina tamarind
Rava ny loza, vaky mampalahelo…
» Manaraka izany, tononkalo roa momba ny sehatra fiantsonana sy ny lamasinina nataon’i Nguyen Binh:
Manomboka eto ny fisarahana
Ny valiha reunion dia nanapaka ny tady rehetra
Fiainam-pisainana, vatana tokana
Nifandimby nandritra ny iray volana
Nahita ankizivavy roa aho indray mandeha
Nifanindry ny takolaka sady nitomany
Aloka roa mizara ny lamosiny ho baolina iray
– “Lavitra ve ny lalana mody any aminao?”
Indray mandeha aho nahita olon-tiana
Manao veloma olon-tiana indray tolakandro
amin’ny gara lavitra
Mihazona ny tanany amin’ny kamo
Mifankahita ny mpinamana roa
Ny eo an-tokotany, ny eo ambany lamasinina
Nifanentana intelo na inefatra teo ho eo izy ireo
Aloka ao anaty haizina hatry ny ela
Nahita mpivady aho indray mandeha
Mahamenatra ny manao veloma ny baolina lava
Nosokafany ilay voanjo, dia nafatony indray
– Hikarakara an’i Neny aho, ry malala!
Indray mandeha aho dia nahita vehivavy antitra iray
Alefaso any an-tanàna lavitra aho
Efa ela no nandeha ny lamasinina ary mbola mijoro izy
Ny lamosina miondrika dia mametraka aloka eo amin’ny lampihazo
READ Khám phá 199 bài thơ anh yêu em ngắn hay và ấn tượng nhất | Anybook.vn
Indray mandeha aho dia nahita olona nandeha
Tsy fantatro hoe aiza no hieritreretana
Dian-tongotra tsy miraharaha ny aloka hafahafa
Ataovy irery ny fisarahana manontolo
Tanana manofahofa tanana
Ny maso mando mijery ny maso
Aiza no mampalahelo noho ity toerana ity
Niandry fiara fitateram-bahoaka aho taloha
Nampiverina ny olona
Nahoana io gara io no sehatra?
Mba hanao veloma fotsiny ny fo
Ny rivotra mangatsiaka dia toy ny alina lalina,
Fa mankaiza ny bodofotsy sy ondana?
Niampita lamasinina alina,
Fiaran-dalamby haingana be amin’ny alina.
Manjavona toy ny masoandro milentika ny jiro,
Ity fiara ity dia mifandray amin’ny fiara hafa…,
Mitselatra toy ny ramanavy lehibe,
Toy ny matoatoa niseho.
Toa mitondra alahelo ny lamasinina,
Mitondra olona hahatsiarovana ireo naratra;
Asandrato firy ombelahin-tongony tsara tarehy.
Very lalana ve ny lamasinina mandeha anio alina?
Toy ny kotroka ny feon’ilay milina,
Misy mahalala olona ve ity lamasinina ity?
Misy namana angamba
Any amin’ny gara iray maika?
Lasa antsasa-dalana ny lamasinina,
Nahoana no tsy mijanona eo amin’ny fiantsoako ianao,
Omeo dimy amby dimampolo minitra aho handefasana,
Lohataona maitso kely niverina tany an-danitra?
Fa izao hariva izao ihany no tadidiko:
Toy ny lamasinina mandalo ny fiainako.
Fa avy amin’ny tobin-tsolika, avy amin’ny throttle kely,
Tsy atao gasy ny fiainana.
Ny lamasinina dia mahafantatra izay haleha izao?
Ny alina lalina dia mamerina ny alina lalina.
Avelao eto ny sambo fifadian-kanina;
Mitondra sarety mavesatra fo.
» Ary farany, voangona tononkalo fitiavana 7 momba ny lampihazo fiantsonana sy ny fiaran-dalamby tena tsara sisa:
1 4, Sehatra fanaovam-beloma
2 5, Division Travel
3 6, Sehatra tolakandro
4 7, Station San San
5 8, Aloky ny filentehan’ny masoandro
6 9, lamasinina alina
7 10, Garan-dalamby Balloon
4, Sehatra fanaovam-beloma
Nijoro teo amin’ny lampihazo aho ny tolakandro mba hijery.
Ny filentehan’ny masoandro volomparasy dia mamela aloka eo amin’ny lavarangana.
Namela ny loko volory ny masoandro mamirapiratra fararano ary niandry.
Mitsoka ny rivotra hanome tsiny ny olona iray ho tsy mahalala.
Naneno lavidavitra ny seranana ny kiririoka.
Mampalahelo sy manirery ny sehatra fiantsonana.
Mihintsana ny hazo miaraka amin’ny ravina sy voninkazo mihintsana.
Toy ny zokiolona miandry.
Araho ny sambo mankany amin’ny seranan-tsambo nofinofy.
Fantaro hoe iza no mbola miraikitra mandrakizay.
Ny lamasinina aloka manjavozavo dia mbola tsy te-hivily.
Navelany ny lanitra tolakandro nalazo.
Tsy misy na inona na inona tavela ao amin’ny fangirifirian’ny fahatsiarovana.
Inona no irinao amin’ny rivotra tolakandron’ny fararano mangina?
Ravinkazo mavo mihintsana mitomany ny fahasitranana.
Mahavaky fo… voahodidin’ny fahabangana… amin’ny tolakandro.
5, Division Travel
Ny kilaometatra an-tsekoly dia leo ny gara
Ny lamasinina dia miverina sy miverina ary avy eo miverina mankany amin’ny seranana
Tsy hita na aiza na aiza ny mpandeha
Ity tanàna ity, ity vohitra ity, tendrombohitra sy renirano
Na dia efa mahazatra aza ny tarehy dia mbola hafahafa ihany
Navelan’ny ridao ny tompony hanarona ny fahanginana
Ahoana no handefasanao fandraisana tsara?
Aiza ny afo fampivondronana mafana?
Inona no hanitry ny alin’ny sekoly?
Nangatsiaka be ny fon’ny mpanjifa ny orana
Ny tranom-bahiny dia manonofy ny afon’ny tanindrazana
Avy amin’ny faran’ny lampihazo mankany amin’ny lampihazo
Tonga sy mandeha ny vahiny mangatsiaka sy tsy miraharaha
Ny vatan’ilay mpivahiny any an-danitra
Mangatsiaka sy mamiratra ny aloka
(Le Trieu Phuong)
READ Tuyển Tập Thơ Quang Dũng hay nhất sống mãi với thời gian | Anybook.vn
6, Sehatra tolakandro
Very tany anaty alan’olona tao am-pianarana aho
Miverena handray ny dobon’ny fitiavana
Nihaona tamin-drainy tamim-pifaliana i Neny teo amoron-dalana
Nihaona tamin’ny rahavaviko aho, nifankahita tamin’ny daty
Eo afovoan’ny firenana dia mandre tongotra saro-kenatra aho
Misalasala manitsaka ny lampihazo taloha mampalahelo
Tsy zaza fa matahotra ny fahasahiranana
Ny olona sahirana, nahoana izy ireo no manirery?
Afeno amin’ny zorony mba tsy hisy hahita
Misavoritaka, tsy misy toromarika avy aiza
Matahotra ny ho tolakandro ary ny alina hanjavona ao anaty haizina
Tavela irery aho, mitsapatsapa ho amin’ny dingana voalohany
7, Station San San
Iza no mbola miandry eny ambony lampihazo?
Efa ela izay no nisaraka
Ny tolakandro dia mamela fahatsapana lalina
Nandrovitra ny foko ny kiririoka
Nikoropaka ilay sambo
Latsaka ny ranomaso
Any amin’ny toeran-kafa, mbola manofahofa tanana ny olona
Voafandrika ao anaty ala mikitroka ny hazavana
Nihantona teny an-danitra ny volana
Ny fo dia mbola mifoha amin’ny nofinofin’ny fiainana
Miala any ambanivohitra handeha any amin’ny faritany hitady fivelomana
Ny lalana mankany amin’ny tanàna lavitra!
Ny tanàna misy jiro be
Tsarovy ny ahi-dratsy eny amin’ny fasana
Miara-miasa mafy i Dada sy Neny mba hiasa ny saha
Fahazazana maditra miaraka amin’ny ombidia
Mifanohitra sy mandroso hatrany ny fiainana
Ny tontolon’ny kontinanta dimy dia manaiky azy io ho trano fonenana
Voafandrika ao anatin’io fitiavana taloha io ny fanahin’ny firenena
Rahoviana indray isika no hifankahita?
Ny lasa dia mitondra alina mampalahelo
Lasa ny lampihazo
Ny tanàna taloha avy lavitra dia tsy afaka miverina
Ny sioka hanao veloma ny filentehan’ny masoandro!
8, Aloky ny filentehan’ny masoandro
Ary farany dia lasa izy
Ny tolakandro dia nitsoka tamin’ny lampihazo vy ny rivotra
Jiro an-dalambe mitsilopilopy mavo
Mihaino mangina ny ranomaso aho
Ririnina fotsiny izao
Ny lobaka manify dia toa mangatsiaka kokoa
Tsy sahy mitomany aho fa milatsaka ny ranomaso
Ny fotoana farany nifanomezana ranomaso
Eo anilanao mangina manondrika ny lohanao
Nino loatra ny teny tantely aho
Ory sy ory ary ory aho
Ny linta mitafy tongotry ny vano be loatra!
Nino tamin’ny foko manontolo aho
Atodiho izao ny tavanao ary mandehana
Marina fa vahiny aho
Feno fo ny fahatsiarovana mavokely
Ny feon’ny siokan’ny lamasinina miantso ny alina maizina
Ndao ary fa zavatra efa lasa ihany io
Zavona ny andro, ka manjavozavo ny silhouette
Menatra sy manirery aho eo afovoan’ny gara
READ Thơ Tháng 11 – Chùm Thơ Tình Tháng Mười Một Cô Đơn Và Lãng Mạn | Anybook.vn
Miantso ny akaniny ny vorona rehefa tolakandro
Henoy ny mandrovitra ny fo izay vao very
Inona koa ny aloky ny filentehan’ny masoandro
Mandeha irery aho!
(Ataovy ny trosako)
9, lamasinina alina
Nandrovitra ny zavona mangatsiaka ny sioka.
Dia nanaraka tsikelikely ny afo lavitra.
Nisy onjan’olona nanosika ny lampihazo,
Tonga soa na veloma,
Ny maso rehetra nijery ilay sambo avy lavitra,
Fenoy fanantenana ny amin’ny hoavy ny lampihazo.
Midira amin’ny lamasinina tsara tarehy rahampitso,
Mamirapiratra toy ny maraina ny alina.
Nijanona tampoka teo amin’ny gara ny lamasinina,
Atsofohy tampoka ny kodia mba hampiala ilay sarety.
Dia manjavona ao anaty haizina,
Avelao fotsiny: Malahelo, faly, malahelo, manenina, mankahala.
Fa mieritreritra ny fiainana taloha
Tsy misy dikany ny fiarandalamby alina rehetra:
Azo oharina amin’ny fiaran-dalamby ny fiainan’ny olona iray,
Io gara io no toerana vonjimaika,
Ary ny alina maizina dia fotoana manjombona.
Mangatsiaka any amin’ny hantsan’ny tsy misy,
Ny fiainana dia sary mihodinkodina,
Ako kely sisa.
(Tran Gia Thoai)
10, Garan-dalamby Balloon
Malahelo aho mijoro eo amin’ny faran’ny lampihazo
Mijery ny aloky ny lamasinina mihalefy
Maso mando manjelanjelatra
Avy amin’ny fanaovam-beloma ve?
Toa miova vanim-potoana ny rivotra
Manidina hazavana avy amin’ny vovoka avy amin’ny orana mankany amin’ny fanahy
Mafana ny lamba famaohana
Malahelo ny olona mandeha mijanona, oh tolakandro
Tiako fa tsy sahy mitia
Ny lampihazo lamasinina dia miafina amin’ny hiaka tara
Izaho_ mbola mangina ianao
Ny fo mangina dia izay ihany
Taona niainana mangina
Firy taona ny zavatra miova kintana mihetsika _ ary ianao
Misy fo eo anilany
Indray andro, nisy vovoka nilentika tao anaty lavaka
Ilay toby fiantsonan’ny arabe taloha nodiaviko
Mianiana isan-taona ny fofon’ny chrysanthemum
Sendra nihaona indray izahay
Henoy ny alahelon’ny fo
Mitrotro anao eo an-tsandriko aho
Mampalahelo ny maso mason’ny vadiko mijery ahy
Ny feon’ny fonao mitomany
Salama, tsy sahy miteny mangina aho
Ary izao no tononkalo tsara indrindra nosoratana momba ny lamasinina sy ny sehatra tsara indrindra tiako halefa aminao, manantena fa ho tianao sy ho tianao koa ireo tononkalo fitiavana ireo. Iray amin’ireo tononkalo fitiavana maro nosoratana tamin’ny sarin’ny lampihazo sy lamasinina voatahiry ao amin’ny fanangonana tononkalo an’i Minh Nhat ity, andao hahita tononkalo mahafinaritra kokoa momba ny fiaran-dalamby sy ny lampihazo manokana. !
See More: Tononkalo fitiavana mampalahelo na tononkalo momba ny lamasinina sy ny sehatra ary tononkalo tsara
Tianao ve ilay lahatsoratra hoe “Amboaran-tononkalom-pitiavana mampalahelo nosoratana momba ny sarin’ny gara sy tobim-biby” ao amin’ny sokajy tononkalo voaangona ao amin’ny varavarankelin’ny bilaogy? Raha tianao dia tsidiho matetika ny bilaogiko mba hamakiana ireo lahatsoratra farany ♡ !
Previous: Tìm hiểu những lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử | Anybook.vn
Next: Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sài Gòn | Anybook.vn